Badhaasa Noobeelii: MM Abiy dhuguma Baha Afrikaatti nagaa buusaniiruu? - BBC News Afaan Oromoo
Badhaasa Noobeelii: MM Abiy dhuguma Baha Afrikaatti nagaa buusaniiruu?
Ministirri Muummee Abiy hojii milkaahaa akkamii dalaganii badhaasa addunyaatti maqaa guddaa kabu kan injifachuu danda'an.
Waraana daangaa Eertiraa waliin ture nagaan xumuuruu, biyya keessattiifi naannoo Lixa Afrikaatti nagaafi araara jajjabeessuu isaaniif akka isaan filate Koreen badhaasa Noobeelii himee jira.
Deeggartootni MM Abiy hojiilee hojjatniif badhaasichi ni malaaf kan jedhan yoo ta'u, haala qabatamaa biyya keessa jiruun tasgabbii dhabuu sabootaa gidduu jirurraa kan ka'e ammoo kan qeeqaniis jiru.
Imala isaanii haa ilaallu
MM Abiy bara 2018 tti biyya rakkoolee gurguddoon liqimfamaa jirtu dhaalan. Walitti bu'iinsa saboota giduu jiru, rakkoo daangaa fi diinagdeen laaffachuun ni eeramu. Ji'oota muraasa keessatti Eertiraa waliin waliigaltee araaraa mallatteessan.
Waliigaltee kanarra gahuuf MM Abiy waliigaltee Aljeers kan Badimee Ertiraaf gadhiisuu of keessaa qabu haal duree tokko malee fudhatan. Kanarraa kan ka'e maatiin waggoota 20 oliif gargar bahe walitti makame, Pireezidant Isaayyas Afawarqiis Itoophiyaatti deddeebi'uu, MM Abiyyis Asmaraatti imaluu eegalan.
Abiy hidhamtoota kumootaan lakkaawwaman gadhiisisuu fi rifoormiiwwan biroo biyya keessatti gaggeesaniifi naannoo gaanfa Afrikaatti nagaan akka bu'u hojii hojjetaniifis leellifaman.
Araarri Eertiaa fulla'eeraa?
Jalqaba daandiin konkolaataa dur cufaafi waranni eegu banamee, meeshaalee fi namoonni biliummaan wal keeessa darbaa ture.
Hanguma nageenyi itti fufee hariiroon cime shakkiin haga tokkos uumame, keessumaa waliiglate araaraa kana gadi fageenyaan bilcheessuurratti. kanaa wajjin walqabtees daandiiwwan banamanii turan cufaman. walitti daldalli tures qabbanaa'eera.
Balaliin xiyyaaraa Finfinnee fi Asmaraa gidduu waggoota 20 booda itti fufe garuu osoo adda hin citiin itti fufeera.
ABBUT waliigalteen kun marii keenyaan ala waan ta'eef hin fudhannu jechuun mormee ture, banamuu daangaattis gara jalqabaa gammachuu hin qaban ture.
Hariiroon hooggantoota ABBUT fi Pireezidantii Ertiraa Isaayyas Afawarqii giduu jiru hamaa ta'uun araarichaa waaressuuf danqaa guddaa ta'eera.
Araarichi waara'uu dhabu isaaf Pireezidant Isaayyas rincicaniiru jechuun kan qeeqanillee jiru.
Jijjiirama akka Itoophiyaa keessatti dhufee biyya isaanii mirga namoomaa mulquun cunqursaan addunyaatti beekamtu keessatti fiduu dhabuufis isaan komatu.
Jijjjiiramni Dimookrasiin walqabatu dhufeeraa?
MM Abiy hidhamtoota siyaasaa gadhiisuun, labsii yeroo muddamaa kaasuuniiru. Dhaabbilee siyaasaa dhorkamanii biyyaa baqatanii turaniis biyyatti deebisaniiru.
Pireezidantii dubartii jalqabaa Itoophiyaa muudaniiru, kaabinee isaanii harka walakkaa dubartoota taasisaniiru. filannoon bara 2020 dhaabbilee siyaasaa hedduu akka dorgomaniis karra bananiiru.
Kunniin bu'aawwan gama dimookraasitiin dhufanii fi safaramuu danda'aniidha. Qeeqxotni isaanii garuu hojiilee dhaabbileen hoojjetan haguuguun guddatanii argamuuf hojjetuu jedhu.
Waldhabdeen saboota gidduu jiru kan duriirra hammaateeraa?
Waldhabdeen saboota gidduu jiru Itoophiyaa keessatti dhimma ijoo ta'us, dhufaatiin MM Abiy bilisummaa siyaasaa guddaa sabootaaf kenneera.
Naannolee tokko tokkotti walitti bu'iinsi saboota giduuttii uumame namoota miiliyoona 2.5 ta'an qe'eerra buqqiseera.
Dhaabbatni baqattootaa Idila Addunyaa gabaasa ji'oota dura baasen mootummaan osoo haallii hin mijatiin namootni qe'ee isaaniitti akka deebi'an jajjabeessaa jira jehuunis gabaasa dhiyeessee ture.
Jaarummaa nageenya Lixa Afrikaatti gahee Abiy
Yeroo gabaaba waajira MM qabatan keessatti Dr. Abiy, naannoo Lixa Afrikaatti gahee jaarsummaa guddaa bahaniiru.
Gaheen waldhabdeen Sudaan gara waraana hamaatti hin ceene bahan olaanaadha. Kanaafis Uummatani Sudaan akka abbaa oolmaa isaanitti fudhataniiru jaalala guddaas horataniiru.
Image copyright EBRAHIM HAMID
Dabalataniis hariiroon dippiloomasii Ertiraa fi Jibuutii gidduu jiru akka fooyya'u shoora guddaa bahan.
Daangaa galaanaa Somaaliyaa fi Keeniyaan waliin qooddatan irrattis waldhabdee biyyoonni lamaan keessa galan furuuf yaalaniiru MM Abiy.
Dhimma Sudaan Kibbaan ammoo Pireezidant Salvaa Kiirii fi Re'iik Machaar waliigalchuuf hojjetaniiru.